Nhau - Pa - saiti nzira dzekurapa dzekutakura bhandi kutsauka
1. Maererano nehukuru hwehuwandu hwekufambisa, iyo yakakamurwa kuita: B500 B600 B650 B800 B1000 B1200 Anowanzo shandiswa mamodheru akadai seB1400 (B inomiririra hupamhi, mumamilimita). Parizvino, kambani hombe yekugadzira inokwana ndeye B2200mm conveyor bhandi.
2. Sekureva kwenzvimbo dzakasiyana dzekushandisa, yakakamurwa kuita yakajairika yerabha yekuendesa bhandi, bhandi rinopisa kupisa, risingadziviriri rabha rekutakura bhandi, asidhi uye alkali inodzivirira rabha rekutakura bhandi, mafuta anodzivirira rabha conveyor bhandi, bhandi rekutakura chikafu uye mamwe mamodheru. Hushoma hukobvu hwechivharo cherabha pane zvakajairwa mabhandi ekuendesa mabhandi uye mabhandi ekufambisa chikafu ndeye 3.0mm, uye hushoma hushoma hweyepasi chivharo cherabha iri 1.5mm; mabhandi anopisa-anopisa emabhara anotakurisa, asinganamire mabharanzi ekuendesa, esimbi uye alkali-asingagadzike mabhandi anotakura emabhora, uye mabhandi emafuta emota. Iko kushomeka kweiyo glue iri 4.5mm, uye hushoma hukobvu hwevhavha yepasi ndeye 2.0mm. Zvinoenderana neakatarwa mamiriro enzvimbo yekushandisa, hukobvu hwe1.5mm hunogona kushandiswa kuwedzera hupenyu hwebasa repamusoro uye rakadzika revhavha.
3. Zvinoenderana neyakagwinyisa bhandi rekutakura, rinogona kukamurwa kuita bhanhire rekutakura bhanhire uye rakasimba canvas conveyor bhandi. Iyo ine simba canvas conveyor bhandi yakakamurwa kuita nylon conveyor bhandi (NN conveyor bhandi) uye polyester conveyor bhandi (EP conveyor bhandi).
2. Pa - saiti nzira dzekurapa dzekutakura bhandi kutsauka
(1) otomatiki dhonza roller kutsauka kugadziridza: Kana iyo kutsauka renji yekutakura bhandi isina kukura, inozvimiririra-yega dhonza roller inogona kuiswa pakatsauka kweanotakura bhandi.
(2) Yakakodzera kuomesa uye kutsauka kugadziridza: Kana bhandi rekutakura rakatsauka kubva kuruboshwe kurudyi, uye gwara racho risingaite, zvinoreva kuti bhandi rekutakura rakasununguka. Iyo tensioning chishandiso inogona kugadziridzwa nenzira kwayo kubvisa kutsauka.
(3) Imwe-mativi yakatwasuka yakatwasuka roller kutendeuka kugadziridza: Iyo yekufambisa bhandi inogara ichitsauka kune rimwe divi, uye akati wandei mamira anotenderera anokwanisa kuiswa munzvimbo yekumisikidza bhandi.
(4) Chinja kutenderera kwekutenderera: bhandi rekutakura rinomhanya kubva pane iro roller, tarisa kana iyo roller isiriyo kana kufamba, gadzirisa iyo roller kune chinzvimbo chakatwasuka uye tenderera zvakajairika kuti ubvise kutsauka.
(5) Ruramisa kutsauka kweanotakura bhandi mubatanidzwa; bhandi rekutakura rinogara richimhanya munzira imwechete, uye kutsauka kwakanyanya kuri pajoini. Iwo wekutakura bhandi mubatanidzwa uye wepakati mutsetse wekutakura bhandi unogona kugadziriswa kubvisa kutsauka.
(6) Kugadzirisa kutsauka kwekusimudza dhonza roller: bhandi rekutakura rine kumwe kutsauka nhanho uye chinhambwe, uye mapoka akati wandei anodhonzwa anogona kusimudzwa kune rakatarisana nedivi rekutsauka kubvisa kutsauka.
(7) Chinja kutsauka kweiyo roller yekukwevera: iko kutungamira kwekutakura bhandi kutsauka kune chokwadi, uye kuongorora kunoona kuti wepakati mutsetse wekukwevera roller hauna kutarisisa kune wepakati mutsetse weanotakura bhandi, uye yekuzvuva roller inogona kugadziridzwa kubvisa kutsauka.
(8) Kubviswa kwezvinobatanidzwa: iyo yekutsauka poindi yekutakura bhandi inoramba isina kuchinja. Kana zvakabatanidzwa zvikawanikwa pane anodhonza nemadhiringi, kutsauka kunofanirwa kubviswa mushure mekubviswa.
(9) Kugadzirisa kutsauka kwekudya: iyo tepi haina kutsauka pasi pechiedza mutoro, uye haina kutsauka pasi pemutoro unorema. Kurema kwekudya uye chinzvimbo zvinogona kugadziriswa kubvisa kutsauka.
(10) Kugadzirisa kutsauka kwebracket: iko kutenderera kwekutenderera kwebhandi, chinzvimbo chakatemwa, uye kutsauka kwakakomba. Iyo nhanho uye kutwasuka kwebracket kunogona kugadziriswa kubvisa kutsauka.